Lemon balm (ပူဒီနံ) - Hello Sayarwon
Lemon balm (ပူဒီနံ)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Lemon balm (ပူဒီနံ)
Lemon balm (ပူဒီနံ) ကဘာလဲ။
ပူဒီနံ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေးပြဿနာများတွင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
အစာခြေဖျက်မှု ပြဿနာများ ။ ။ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ လေမလည်နိုင်ခြင်း၊ အန်ခြင်း နှင့် ဗိုက်ရစ်နာခြင်း
နာကျင်ခြင်း ။ ။ ရာသီလာစဉ် ဆီးစပ်ကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း နှင့် သွားကိုက်ခြင်း
စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ။ ။ စိတ်ကစင့်ကလျားဖြစ်ခြင်း နှင့် မှိုင်တွေနေခြင်းများ
ထို့ပြင် သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ရွက်ဟာ စိတ်ပူပန်မှုတွေ၊ အိပ်ရေးပျက်တာတွေနှင့် ကနာမငြိမ်ဖြစ်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ တက်ကြွလွန်စိတ်ဂနာမငြိမ်ရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ လေပြွန်ယောင်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ ယောင်ယမ်းခြင်း၊ အကျိတ်များနှင့် အင်းဆက်အကိုက်ခံတဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို တခြားနေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ထပ်မံသိလိုသောအချက်များ ရှိပါက မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်အသုံးဝင်ပုံကို သေချာလေ့လာထားခြင်း မရှိသေးပါ။ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ကို ထပ်မံသိလိုသောအချက်များ ရှိပါက မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အချို့မှာတော့
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ဟာ အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့် စိတ်ပူပန်ခြင်းတွေကို ဘယ်လိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တာကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အိပ်မပျော်တဲ့ ပြဿနာကို ခံစားနေရတဲ့ လူတွေနှင့် စမ်းသပ်ချက်အရ ၈၁%လူများတွင် Valerian ဆေးပင်( စိတ်ငြိမ်စေသော အပင်) နှင့် သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို အသုံးပြုသောအခါ ပိုပြီးအိပ်ပျော်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူများတွင် Valerian ဆေးပင်( စိတ်ငြိမ်စေသော အပင်) နှင့် သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို အသုံးပြုခြင်းဟာ ဘယ်လို ရလဒ်ရသလဲဆိုတာကို သေချာလေ့လာထားတာ မရှိပါဘူး။
တခြားစမ်းသပ်မှုမှာတော့ ကျန်းမာတဲ့ လုပ်အားပေး ၁၈ ယောက်အား သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်မှထုတ်ထားတဲ့ မတူညီတဲ့ ဆေးပမာဏနှစ်ခု(၃၀၀ mg နှင့် ၆၀၀ mg) သို့ placebo(အာနိသင်မဲ့ဗလာဆေး)အား ၇ ရက်စာပေးပြီး စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ ၆၀၀ mg သောက်တဲ့သူတွေမှာ ပိုမိုတက်ကြွလန်းဆန်းပြီး သတိရှိမှုတိုးတက်လာတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ဟာ ရေယုံကို ဘယ်လိုကုသနိုင်သလဲ။
ရေယုံခံစားနေရသော လူ၁၁၆ယောက်နှင့် လုပ်သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် နှုတ်ခမ်းယောင်သောနေရာတွင် သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်နှင့်လုပ်ထားသောကရင်မ် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် နီရဲယောင်ယမ်းခြင်းကို ၂ ရက်အတွင်း သက်သာစေပါတယ်။
ဂျာမနီဆေးရုံနှင့် အရေပြားဆေးခန်းတစ်ခု၏ လေ့လာခြင်းတွေအရ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ဟာ လိင်အင်္ဂါနှင့် ပါးစပ်တွင်ပေါက်သော ရေယုံကို အနာကျက်မြန်စေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တိရစ္ဆန်များနှင့် စမ်းသပ်မှုအရလည်း သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ဟာ ရေယုံတွေကို သက်သာစေကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပထမဆုံးစွာ စမ်းသပ်ချက်အရ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ဟာ HIV ပိုးများ များပြားစုဝေးခြင်းကို လျော့နည်းစေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်နှင့် တခြားဆေးဖက်ဝင်အပင်များကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဟာ အစာမကြေတာ သက်သာစေပါတယ်။
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ရဲ့အဆီဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို အမြင့်မားဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
a Listeria Monocytogenes နှင့် Staphylococcus Auerus (ဘက်တီးရီးယားများ)ကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ဟာ အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာ မှတ်ဉာဏ်တိုးပွားစေပြီး အယ်ဇိုင်းမားရောဂါမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ထပ်မံသိလိုသော အချက်များရှိပါက တိုင်းရင်းဆေးဆရာနှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ပူဒီနံ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်ဟာ အောက်ပါတို့မှ တစ်ခုခုခံစားရလျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးဆရာနှင့် ဆွေးနွေးပါ…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ။ သင်ဟာကလေးကို မွေးဖွားရန်စောင့်နေရချိန် သို့မဟုတ် နို့တိုက်ကျွေးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသော ဆေးများကိုသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
တခြားဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေရချိန်၊။ သင်ဟာ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲ ဆေးတွေသောက်နေခဲ့လျှင်
သင်ဟာ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက် သို့မဟုတ် ဆေးတစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်တဲ့ရောဂါရှိလျှင်
သင့်ဟာ နာမကျန်းဖြစ်နေလျှင် သို့မဟုတ် မူမမှန်မှုတစ်ခုခုဖြစ်နေလျှင် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနေလျှင်
သင်ဟာ အစားအသောက်၊ ဆိုးဆေး၊ ကြာရှည်ခံဆေး သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်တို့နှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို ပုံမှန်သောက်ခြင်းဟာ ဆေးပုံမှန်သောက်ခြင်းလောက် တားမြစ်ခံထားရခြင်းမရှိပါဘူး။ ဘေးကင်းဖို့အတွက် လေ့လာမှုတွေလုပ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို သောက်သုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေက ဆိုးကျိုးတွေထက် ပိုနိုင်ပါတယ်။ ထပ်မံသိလိုသော အချက်များအတွက် တိုင်းရင်းဆေးဆရာ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ပူဒီနံ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကလေး ။ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို ကလေးတွေ အအေးမိတာကို ကုဖို့သုံးပါတယ်။ ကလေးအသက်အရွယ်ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကို ပြောပြခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သော ပမာဏပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်။ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ သုံးဖို့ စိတ်ချရခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်မတွေ့ရသေးပါး။ မသုံးခြင်းဟာ ပိုအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်း။ ခွဲစိတ်မှုမတိုင်ခင် ၂ပတ်အလိုတွင် အသုံးပြုတာကို ရပ်ထားသင့်တယ်။
ပူဒီနံ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ပါးစပ်မှသောက်ခြင်း။ ။ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကြောင့် ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း ၊ မူးဝေခြင်းနှင့် ရင်ကြပ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လိမ်းခြင်း။ ။ လိမ်းခြင်းကြောင့် အရေပြားကို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်စေပြီး အနာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းက ဒီဆိုးကျိုးတွေကို မခံစားရပါဘူး။ ဒီထဲမှာ မပါတဲ့ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သေချာသိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးဆရာနှင့် သေချာဆွေးနွေးပါ။
ပူဒီနံ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ပါတဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေက သင်လတ်တလော သောက်ထားတဲ့ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးဆရာနှင့် သေချာဆွေးနွေးပါ။
အိပ်ဆေးနှင့် သိုင်းရွိုက်ရောဂါ( လည်ပင်းကြီးရောဂါ) အတွက်သောက်သောဆေး။ ။ ဒီဆေးတွေနဲ့ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ဟာ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့် လည်ပင်းကြီးရောဂါအတွက် ဒီဆေးတွေသောက်နေရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် မေးမြန်းပြီးမှ သုံးသင့်ပါတယ်။
HIV အတွက် သောက်ဆေးများ။ ။ HIV အတွက် သောက်နေရတဲ့ ဆေးများနှင့် သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်တို့ ဓါတ်ပြုခြင်းရှိ၊ မရှိ သေချာမသိရသေးပါ။ ဆေးသောက်နေစဉ်မှာ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို မသုံးသင့်ပါဘူး။
ပူဒီနံ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဆေးတောင့် – ၃၀၀-၅၀၀မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် လိုသလောက် သုံးပါ။
ရေနွေးကြမ်း – ၁.၅-၄.၅ဂရမ် အသံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို ရေနွေးထဲစိမ်သောက်လို့ရပါတယ်။
ဆေးရည်- တစ်နေ့လျှင် အစက်၆၀၊ နေ့စဉ်သုံးလို့ရပါတယ်။
လိမ်းဆေး- တစ်နေ့၃ကြိမ် သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အနာ သို့မဟုတ် ရေယုံအနာ- သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို ၂-၃ဇွန်းစာ ခြေပြီး ရေနွေးပူပူထဲထည့်ပြီ ၁၀-၁၅မိနစ်ထားပါ။ အအေးခံပါ။ အရည်ကို ဂွမ်းဖြင့်ယူပြီး အနာပေါ်ကို နေ့ရှိသရွေ့ လိမ်းပါ။
လူတွေပေါ်မူတည်ပြီး သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို သုံးနိုင်တဲ့ ပမာဏ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ သုံးနိုင်တဲ့ပမာဏဟာ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် တခြားအချက်တွေပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို သုံးတာက အမြဲစိတ်မချရပါဘူး။ သင်နှင့် သင့်တော်သော ပမာဏကိုရရန် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးဆရာနှင့် သေချာဆွေးနွေးပါ။
ပူဒီနံ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
သံပရိုနံ့ရှိတဲ့ ပူဒီနံအရွက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြင့် ရနိုင်ပါတယ်။
ရေနွေးကြမ်း ၊ ဆေးတောင့်၊ အရွက်ကနေ အဆီအနှစ်ထုတ်ယူထားတဲ့ ဆေးရည်နှင့် အဆီ
Hello Health Group သည် ဆေးပညာနှင့် ပတ်သတ်သော အကြံများပေးခြင်း။ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းများ မလုပ်ဆောင်ပေးပါ။
Reference: Lemon-Balm. http://umm.edu/health/medical/altmed/herb/lemon-balm. Accessed 06 December, 2016.
Lemon-Balm. http://www.herbwisdom.com/herb-lemon-balm.html. Accessed 06 December, 2016.
Lemon-Balm. https://www.drugs.com/npc/lemon-balm.html. Accessed 06 December, 2016.
Lemon-Balm. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-437-lemon%20balm.aspx?activeingredientid=437&. Accessed 06 December, 2016.